Nize nikhonze uYehova uThixo wenu, asisikelele isonka sakho, namanzi akho; ndisisuse isifo phakathi kwakho. IEksodus 23:25
UDavide waya eba mkhulu ngokuba mkhulu; uYehova wemikhosi ubenaye. 1 YeziKronike 11:9
Kumongameli. Umhobe kaDavide. Yehova, uvuyile ngamandla akho ukumkani, Asikuko nokuba uyagcoba ngosindiso lwakho! iNdumiso 21:1
Wacela ubomi kuwe, wampha, Wamnika imihla emide ngonaphakade kanaphakade. iNdumiso 21:4
Ngokuba umenze waba yintsikelelo ngonaphakade, Umvuyisa ngovuyo ebusweni bakho. iNdumiso 21:6
Uyawagcina onke amathambo alo, Akwaphuki nalinye kuwo. iNdumiso 34:20
Thixo, undifundisile kwasebuncinaneni bam; Unangoku ndiyayixela imisebenzi yakho ebalulekileyo.Thixo, musa ukundishiya kude kuye ebuxhegweni nasezimvini; Ndide ndiyixele ingalo yakho kwisizukulwana esitsha, Nobugorha bakho kubo bonke abaya kuza. iNdumiso 71:17, 18
Akoyikiswa ziindaba ezimbi; Iqinisekile intliziyo yakhe, ikholose ngoYehova. iNdumiso 112:7
Uya kwandula uhambe ngendlela yakho ukholosile. Lungabetheki unyawo lwakho. miZekeliso 3:23
Wathi uDavide kuSolomon unyana wakhe, Yomelela ukhaliphe, wenze. Musa ukoyika, musa ukuqhiphuka umbilini; ngokuba uYehova uThixo, uThixo wam, unawe; akayi kukuyekela, akayi kukushiya, ude uwugqibe wonke umsebenzi wenkonzo yendlu kaYehova. 1 YeziKronike 28:20
Okunaye yingalo yenyama, okunathi nguYehova uThixo wethu, ukuba asincede, alwe amadabi ethu. Abantu bayama emazwini kaHezekiya ukumkani wakwaYuda. 2 YeziKronike 32:8
Emlonyeni wabantwana nabanyayo useke amandla, Ngenxa yababandezeli bakho, Ukuze udambise utshaba nophindezelayo. iNdumiso 8:2
9 Ngokuba ngawe ndigila amajarha, NgoThixo wam ndiqabela ezindongeni.UThixo yena, igqibelele indlela yakhe; Ilizwi likaYehova linyibilikisiwe, Uyingweletshetshe kubo bonke abazimela ngaye.Ngokuba ngubani na onguThixo, ingenguye uYehova? Ngubani na oliliwa, ingenguThixo wethu?UloThixo undibhinqise ubukroti, Uyigqibelelisileyo indlela yam; iNdumiso 18:29, 30, 32
Abanye bakhankanya iinqwelo zokulwa, abanye bakhankanye amahashe, Ke thina sikhankanya igama likaYehova uThixo wethu. iNdumiso 20:7
Ndinge ndiphelelwe, koko bendikholwa kukuba ndokubona ukulunga kukaYehova Ezweni lobu bomi.Thembela kuYehova; Yomelela, ikhaliphe intliziyo yakho, Uthembele kuYehova. iNdumiso 27:13, 14
NguYehova amandla am nengweletshetshe yam; Yakholosa ngaye intliziyo yam, ndancedeka. Iyadlamka ke intliziyo yam, Ndiyamdumisa ngengoma yam.UYehova ungamandla kubo; Uligwiba losindiso kumthanjiswa wakhe yena. iNdumiso 28:7, 8
Usindiso lwamalungisa luphuma kuYehova; Uligwiba lawo ngexesha lembandezelo. iNdumiso 37:39
Ingaphela inyama yam nentliziyo yam: Iliwa lentliziyo yam, nesabelo sam, nguThixo ngonaphakade. iNdumiso 73:26
Umphefumlo wam uvuza iinyembezi sisingqala, Ndimise ngokwelizwi lakho. iNdumiso 119:28
Ngokuba waba ligwiba kwisisweli, igwiba kwihlwempu ekubandezelweni kwalo, ihlathi esiphangweni, umthunzi lakubalela, xa ukufutha kwabangcangcazelisayo kwaba njengesiphango eludongeni. Isaya 25:4
musa ukoyika, kuba ndinawe mna; musa ukubhekabheka, kuba ndinguThixo wakho; ndikukhaliphisile, ewe, ndikuncedile, ndikuxhasile ngesandla sam sokunene sobulungisa bam. Isaya 41:10
Ondele ke uYesu, wathi kubo, Kubantu le nto ayinakwenzeka; ke kuye uThixo zonke izinto zinako ukwenzeka UMateyu 19:26
Sithini na ke ngoko kwezi zinto? Ukuba uThixo ungakuthi, ngubani na ongasichasayo? KwabaseRoma 8:31
Ukutsho andithi, sikulingene ngokwethu ukucamanga nto engathi iphuma kuthi ngokwethu; ukukulingana kwethu oko kuphuma kuThixo, 2 KwabaseKorinte 3:5
kuba zona iintonga esiphuma ngazo umkhosi, azizezenyama; kuye uThixo zinamandla okuwisa iinqaba; 2 KwabaseKorinte 10:4
ukuba aninike, ngokobutyebi bozuko lwakhe, ukomelezwa ngamandla ngaye uMoya wakhe, ngokusingisele emntwini ongaphakathi; KwabaseEfese 3:16
Elokugqiba, bazalwana bam, ndithi, Yomelelani eNkosini, nasekuqineni kokomelela kwayo. KwabaseEfese 6:10
Ndinokuzenza izinto zonke, ndikulowo undomelezayo, uKristu. KwabaseFilipi4:13
Nina ningabakaThixo, bantwanana, nibeyisile bona; ngokuba lowo ukuni nguyena mkhulu kunalowo usehlabathini. 1 UYohane 4:4
Ngako oko utsho uYehova, uThixo wemikhosi, ukuthi, Ngenxa enokuba nilithetha elo lizwi, yabona, ndiwenza umlilo amazwi am emlonyeni wakho, naba bantu babe ziinkuni, ubadle. Yeremiya 5:14
Ndobomeleza ngoYehova, bahambahambe egameni lakhe; utsho uYehova. UZekariya 10:12
Kuba asinini abathethayo, nguMoya kaYihlo othethayo ngaphakathi kwenu. UMateyu 10:20
Kuba ilizwi lomnqamlezo libubudenge okunene kwabatshabalalayo; kodwa ke kwabasindiswayo, thina aba, lingamandla kaThixo. 1 KwabaseKorinte 1:18
Nokuthetha kwam, nokuvakalisa kwam uKristu kube kungengamazwi oyisa ngabulumko babantu; bekungokuqondakalisa koMoya nokwamandla,ukuze ukholo lwenu lungabi sebulumkweni babantu, lube semandleni kaThixo. 1 KwabaseKorinte 2:4, 5